Dhibanayaasha Dagaal Qoyska Dhex Mara, Qashqashaadda, ama Fal Dambiyeedka La Xiriira Galmoodka: Xaqa Aad U Leedahay In Aad Ka Baxdo Heshiiska Kirada | LawHelp Minnesota
Dhibanayaasha Dagaal Qoyska Dhex Mara, Qashqashaadda, ama Fal Dambiyeedka La Xiriira Galmoodka: Xaqa Aad U Leedahay In Aad Ka Baxdo Heshiiska Kirada
Dhibanayaasha Dagaal Qoyska Dhex Mara, Qashqashaadda: Xaqa Aad U Leedahay In Aad Ka Baxdo Heshiiska Kirada (PDF)499.69 KB
Ogeysiiska Ka Bixidda Heshiiska Kirada Oo Ugu Wacan tahay Cabsi (PDF)107.2 KB
Qoraal ka soo baxay koox sadexaad (PDF)80.06 KB
Xaqqa uu Kirestahu ku wacan karo Caawimaad
Haddii aadan heysan nabadgelyo dagaal qoyska dhex mara dartiis la xiriir Day One Services.
Wac 1(866) 223-1111 ama fariin u dir (612) 399-9995
Ama soo booqo www.dayoneservices.org ama www.MNcasa.org
Haddii aadan heysan nabadgelyo dagaal galmoodka la xiriira dartiis wac: 1 (800) 656-4673.
Qof kasta oo kireyste ah oo ka badbaada xadgudub, qashqashaad, ama fal dambiyeed la xiriira galmoodka oo aan deganeyn guryaha kirada laga taageero waa uu burin karaa heshiiska kirada si uu u badbaado. Waxaa jira talaabooyin la doonayo in aad raacdo. Talaabo waa in loo qaadaa dariiqa saxa ah haddii aad dooneyso in aad ka baxdo heshiiska kirada.
Waa kuwee Sharciyada Codso?
Fiiro gaar ah: Haddii aa degan tahay:
Guryaha kirada laga taageero
Guryaha baadiyaha ee USDA
Guryaha Dadka Dakhligoodu Yar Yahay ee canshuur
dhaafka loo sameeyo (Section 42)
aad heysato foojarka Section 8
waxaa jira sharciyo kale oo kuwa dawladda dhexe ah oo ilaalinaya xuquuqda dadka ka badbaada dagaalka qoyska dhex mara iyo rabshadaha galmoodka. Waad ka bixi kartaa heshiiska kirada ee guryaha kirada laga taageero. Waxa kale oo aad leedahay xuquuq dheeraad ah oo sharciga Minnesota oo lagu faahfaahiyey warqadda xogta urursan.
Haddii aad degan tahay guryaha barnaamijka taageerada kirada, akhri xogta urursan Xaquuqda Guryaha Kiradooda la Kabo ee Dhibanayaasha Dagaalka Qoyska Dhexdiisa ah dhibku ka soo gaaro iyo galmada Xoogid ah si aad u hesho macluumaad dheeraad ah ka hor inta aadan ka bixin heshiiska kirada.
Talaabada 1aad: Qoraal ka samee
La imoow HAL mid ka mid ah qoraalada soo socda haddii aad dooneyso in aad ka baxdo heshiiska kirada. Waxa lagaa doonayaa 1 kaliya.
Amarka kala badbaadinta (OFP)
Amar Kala Fogeynta
Amarka Kala Fogeynta ee Dagaalka Qoyska Dhex Mara
Qoraal uu saxiixay mid ka mid ah saraakiisha maxkamadda. Saraakiisha maxkamadda waxaa ka mid noqon kara qaali, garsoore, maamulaha maxkamadda, ama sarkaalka kor kala socoshada. Waxa ay noqon kartaa, warqad ay soo qoreen kor kala socoshada, ama xeer ilaalinta. Waxa ay cadeyn kartaa in aad tahay dhibane loo geystay xad gudubka qoyska, qashqashaad, ama faldambiyeedka galmoodka. Waa in ay cadeysaa magaca qofka dhibka geysanaya haddii aad garaneyso OO amaankaagu ku jiro in aad bixiso.
Qoraal uu saxiixay xeer ilaalinta magaalada, gobolka ama hay’adaha sharciga ee qabiilka oo ay ku cadahay in aad tahay dhibane dagaal qoyska dhex mara, qashqashaadda ama dambiyada la xiriira galmoodka. Waxa ay noqon kartaa warbixinta booliska, warbixinta baaritaanka ama qoraal oo ay saxiixeen hay’adaha nabadgelyada. Waa in ay cadeysaa magaca qofka dhibka geysanaya haddii aad garaneyso OO amaankaagu ku jiro in aad bixiso.
Qoraal ay soo saareen “koox sadexaad oo awood u leh”. Koox sadexaad oo awood u leh waa:
Xirfadlayaasha caafimaadka oo cadeyn kara in aad tahay dhibane dagaal dhib ka soo gaaray (sida dhakhtar ama kalkaaliye caafimaad)
La taliyaha dagaalka la xiriira galmoodka oo ka shaqeeya xarumaha gurmadka oo aqoon u leh u gurmadka dhibanayaasha.
U doodaha dhibanayasha dagaalka qoyska dhex mara oo ka shaqeeya hoyga dumarka lagu xad gudbo ama barnaamijyada dagaalka qoyska dhex mara oo laga heli karo macluumadka, u doodayaasha, gurmadka, hoyga degdegga ah, ama taageerada dhibanayaasha dagaalka qoyska dhex mara.
Waxa aad adeegsan kartaa foomka halkan ku lifaaqan ee xogta urursan ee lagu magacaabo “Odhaahda Koox Sadexaad Oo Awood U Leh”.
Fiiro gaar ah: Haddii ay qoraaladan ku jiraan macluumaad aadan dooneyn in ay dadka kale arkaan waad “qarin” kartaa adiga oo khad madoow ku tirtira. Waxa aad marin kartaa qalin ama xabag cad si aanay dadka kale u arag.
Tusaale ahaan, waxa aad qarin kartaa macluumadka la xiriira xadgudubka ilmaha loo geysto. Waxa aad qarin kartaa macluumaadkaas marba haddii qoraalku cadeynayo in adiga ama qof kula nool aad tihiin dhibanayaasha dagaalka qoyska dhex mara, qashqashaad ama xadgudubka galmoodka.
Talaabada 2aad: Ogeysiis Qoraal Ah U Qor Kireeyaha
Waa in aad kireeyaha siisaa ogeysiis qoraal ah. Waxa aad isticmaali kartaa “Ogeysiiska Ka Bixidda Heshiiska Kirada” ee halkan ku lifaaqan. Haddii aad diyaariso ogeysiis aad adigu qorto waa in ay ku cadahay:
Adiga ama qof guriga kugula nool aad dareemeysaan cabsi aad qof kale ka cabsaneysaan.
Aad dooneyso in aad ka baxdo heshiiska kirada.
Taariikhda aad dooneyso in aad guurto. Lama DOONAYO in aad bixiso 30 ama 60 maalmood oo ogeysiis ah. Taariikhda aad dooneyso in aad guurto.
Waxyaabaha aad dooneyso in kireeyuhu ka yeelo alaabada aad guriga uga tagto.
Halkan waxaa ku lifaaqan qoraalka talaabada 1aad ee ogeysiiska qoraalka ah.
Heyso nuqul ka mid ah ogeysiiska qoraalka ah ee aad u dirto kireeyaha.
Talaabada 3aad: Bixi Kirada ama Guur
Waa in aad bixisaa kirada oo dhan bilaha aadan degan tahay guriga. Tusaale ahaa, haddii aad ogeysiiska gaarsiiso kireeyaha 2da Agoosto oo aad dooneyso in aad guurto 15ka Agoosto, weli waa in aad bixisaa dhamaan kirada Agoosto marka la gaaro xilligeeda.
Heyso cadeynta muujineysa in aad bixisay kirada. Haddii aad lacag cadaan ah ku bixiso ka qaado lacag qabasho. Haddii aad ku bixiso jeegga lacagta, ka sameyso nuqul ama sawir ka qaad marka aad ku qorto magaca kireeyaha oo heyso lacag qabashada muujineysa in aad siisay kireeyaha.
Guur taariikhda aad ogeysiiska ugu qortay kireeyaha oo furaha u celi kireeyaha.
Haddii aad raacdo mid kasta oo ka mid ah 3da talaabo ee kore heshiiska kirada waxa uu ku egyahay taariikhda aad ka guurto guriga mas’uulna kama tihid bilaha ka haray heshiiska kirada. LAAKIIN, haddii aadan u sameyn sida sharcigu ku farayo, waxa aad mas’uul ka noqon kartaa inta ka hartay heshiiska korada.
Fiiro gaar ah: Xitaa haddii aad ka baxdo heshiiska kirada oo aad raacdo 3da talaabo ee kor ku xusan weli waxa aad mas’uul ka tahay lacagta uu kugu lahaa kireeyaha ka hor inta aadan gaarsiin ogeysiiska.
MUHIM: Haddii aad ka baxdo heshiiska kirada adiga oo raacaya 3da talaabo ee kor ku xusan oo kireeyuhu kaala haro keydka ee Kirada (deposit), lagaama doonayo in aad sameyso waxyaabo dheeraad ah waadna guuri kartaa.
Maxaan yeelayaa haddii ay deganayaal kale ku jiraan heshiiska kirada?
Haddii ay jiraan dad kale oo kugula qoran heshiiska kirada, heshiiskooda kirada waxa uu dhamaanayaa taariikhda aad guurto. Tusaale ahaan, haddii aad ogeysiiska ku qorto in aad guureyso 13ka Maajo (May), dadka kale ee kugula qoran heshiiskooda kirada waxa uu ku egyahay 31ka Maajo. Waxaa lagaa doonayaa in ay guuraan taariikhdaas ama ay heshiis cusub la gaaraan kireeyaha. Waxaa laga yaabaa in lacag keyd ah oo cusub laga qaado heshiiska cusub ee ay la galaan kireeyaha.
Kireeyuhu malawadaagi karaa macluumaadkeyga dadka kale?
Kireeyuhu uma sheegi karo cidna in ay tahay dhibanae rabashad loo geystay ama ma siin karo cidna macluumaadka ogeysiiska qoraalka ah ama qoraalada la socda adiga ii aan siin ogolaasho qoraal ah. Marka kaliya ee macluumaadkaaga uu dad kale la wadaagi karo kireeyaha waa haddii macluumaadka u gudbinayo maxkamadda si u guriga qof uga saaro ama loo soo celiyo lacagta kirada ee aan la bixin ama burbur loo geystay guriga.
Mulkiiluhu ma igu khasbi karaa inaan sheego magaca qofka xadgudubka ii geystay?
Maya. Kireeyaha wuu ku weydiin karaa magaca qofka kuu geystay xadgudubyada ama qofka gurigaaga ka tirsan, laakiin kireeyaha kuguma khasbi karo in aad u sheegto. Waajib kuguma aha in aad u sheegto haddii aad u aragto in aysan badbaadadaada dan u aheyn ama haddii aadan garenyn qofka magaciisa. Weli waad ka bixi kartaa heshiiska kirada sida uu dhigayo sharcigan haddii aad inta kale sameyso.
Kireeyaha ma igu khasbi karaa inaan ka haro xuquuqdaad ama aan saxiixo qoraal aan kaga harayo xuquuqdaas?
Maya. Kireeyaha kuguma khasbi karo in aad ka harto xuquuqda ku xusan xogtan urursan. Taasi waxa ay ka dhigan tahay heshiis kasta oo dhex mara adiga iyo kireeyaha oo aan sharciga waafaqsaneyn, waa sharci daro. Xitaa haddii ay ku xusan tahay heshiiska kirada.
Kireeyaha ma igu khasbi karaa in aan bixiyo wax ka badan kirada bisha aan guurayo iyo in aan ka haro keydka kirada (deposit)?
Maya. haddii aad qaado talaabooyinka ku xusan xogta urursan mas’uuliyadda kaa saran kireystaha waa dhamaatay. Waajib kuguma aha in aad bixiso lacag dheeraad ah si aad amaan u hesho.
Mashruucan waxaa laga bixyey tabooha 2016-WL-AX-0052, ee lagu abaalmariyey Xafiiska Dambiyada Liddiga Ku ah Dumarka, Waaxda Garsoorka ee Mareykanka. . Fikradaha, waxyaabaha lagu ogaado, iyo talo siinta lagu soo bandhigay daabacaaddan /bandhigyada waa mid u gaar ah qorayaasha mana aha kuwa u taagan aragtida Waaxda Garsoorka, Xafiiska Rabshadaha Liddiga ku ah Dumarka.